သတိုး: အဆုံးမဲ့ နိဂုံး
မမရည်အပေါ် ကျွန်မ၏ မုန်းမျက်ခြင်းတို့သည် ကိုကိုကြီး ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားခဲ့ချိန်မှ စတင်ခဲ့ပါသည်။
တကယ်က ကိုကိုကြီး သေသွားရမည့်အစား မောင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မမရည်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက် သေလွန်သွားကြဖို့ ကောင်းသည်ဟု ကျွန်မ မကြာခဏ တွေးနေမိတတ်သည်။ သို့သော် ထိုအတွေးမျိုး တွေးမိခြင်းအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်နောင်တစိတ်က ထိုအတွေးနောက်မှာ တစ်ပြိုင်နက်ကပ်လျှက် ပူးတွဲပါလာခဲ့ပြန်သည်။ ဘယ်လောက်များ အခြေမမြစ်မရှိတဲ့ အတွေးပါလဲ။ ဘယ်လောက်တောင် မိုက်မဲရူးသွပ်လိုက်ပါသလဲ။
မောင့်အပေါ် တွယ်တာချစ်မက်ဆဲ၊ မြတ်နိုးကိုးစားဆဲဖြစ်သော ကျွန်မအတွက် မောင် သေလွန်သွားခဲ့လျှင် ဆိုသော အတွေးသည် အလွန်တရာ သွေးပျက်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာပင် ဖြစ်တော့သည်။ ဟင့်အင်း..။ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်မှ မောင်မသေစေရ။ ကျွန်မ၏ဘ၀အဓိပ္ပါယ် ရှင်သန်ပြည့်စုံစေရန်အတွက်မှာ မောင် မရှိလို့ မဖြစ်ပါ။ မောင်သည် ကျွန်မအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တောင့်တမှု တစ်ခုပဲဖြစ်သည်။
သို့ဆိုလျှင် မမရည် သေလွန်သွားဖို့ ဆိုသော ကျွန်မ၏ စိတ်အတွေးသည်လည်း တစ်ဖက်စောင်းနင်း ဆန်နေပေတော့မည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ မောင်တို့၊ မမရည်တို့ မသေပဲ တကယ့်တကယ် သေဆုံးသွားသင့်သူမှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်နေမလား မသိ။ ညစ်ညူးချောက်ခြားဖွယ် စိတ်အတွေးဒုက္ခတွေကို မောင်နှင့်အတူ ချန်ထားရစ်ခဲ့။ ဤကမ္ဘာလေကမှာ ကျွန်မ မရှိတော့သောအခါ ကျွန်မ တင်ကြိုထိတ်လန့် သွေးပျက်နေခဲ့ရသော အဖြစ်တွေဟာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြမည် ဆိုလျှင်လည်း ဖြစ်လာကြပါစေတော့။ ကျွန်မက ဘာတစ်ခုမှ သိတတ်ခံစားနိုင်တော့မှာ မဟုတ်။
အို..။ ကျွန်မ၏ အတွေးတို့ မှာယွင်းလွဲချော်နေပြန်ပြီ။ ဟင့်အင်း.. ကျွန်မအပေါ် ထောက်ထားငဲ့ကွက်မှုမဲ့ သစ္စာပျက်ယွင်းကြမည့် အဖြစ်ကိုလည်း ကျွန်မ မလိုလားပါ။ ကျွန်မ တမလွန်ဘ၀မှာ ရောက်ရှိနေခဲ့ဦးမည် ဆိုလျှင်တောင် ထိုအဖြစ်မျိုးကို ရောက်ရာဘ၀မှ မကြည်ဖြူ။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်။
ဘ၀ကူးပြောင်းသွားချိန်ထိတောင်မှ မောင့်အပေါ် ချစ်မြတ်တွယ်တာမိသော ကျွန်မ၏ အချစ်တွေက တည်တံ့ခိုင်မြဲ နေဦးမှာပါ မောင်ရယ်။
ပြီး.. ကျွန်မ ခုံမင်တွယ်တာလှသော မောင်ပါဝင်သည့် ဘ၀ကလေးကိုလည်း စောစီးစွာ စွန့်ခွာမသွားလိုသေးပါ။ မောင်ပါဝင်သည့် ကျွန်မတို့၏ နှစ်ကိုယ်တူဘ၀ကလေးအား (မောင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မဖြစ်ဖြစ်) တစ်စုံတစ်ယောက်၏ သေလွန်ခြင်းဖြင့် ကွေကွင်းရမည့်အဖြစ်ကို ကျွန်မ အတွေးနှင့်ပင် ရင်ဆိုင်ရန်မရဲ။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မ၏ အတွေးထွက်ပေါက်များအားလုံး ပိတ်ဆို့ကုန်ရသမျှ မမရည်အပေါ် ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော မုန်းမျက်ညိုးတေးမှုများကိုသာ သိုမှီးတိုးပွားမိစေခဲ့တော့သည်။
“ခင်မင်းက အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အလိုလောဘ ကြီးလွန်းတယ်”
မောင်က စွတ်စွဲသလို ဆိုလေလျှင် ကျွန်မ ဘယ်ခါမှ မငြင်းခဲ့မိပါ။ “အထူးသဖြင့် မောင့်ရင်ထဲက ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်ပေါ့” ဟု စိတ်စကားဖြင့်ပြန်ဖြေကာ ပြုံးငြိမ်နေမိတတ်သည်။
စင်စစ် ခင်မင်းဖြူဆိုသော ကျွန်မက ဟိုး… ငယ်နုစဉ်ဘ၀မှာကတည်းက ချစ်ခြင်းငတ်မွတ်ခဲ့ရသူပေပဲ။ ကျွန်မ၏ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ကံခေလွန်းလှသောအရာသည် ထို ချစ်မြတ်ယုယခံဘ၀ပဲ ဖြစ်သလို လောဘတကြီး လိုချင်တောင့်တခဲ့သော အရာလည်း ဖြစ်လေသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သက်၍ ချိနဲ့နုံခဲ့ရသော ကျွန်မ၏ ငယ်ဘ၀ကိုဖြင့် ကျွန်မ နည်းနည်းမျှ ပြန်မတွေးချင်။ ၀မ်းနည်းနာကျင် ရလွန်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေအားလုံးက ဖခင်ကို ‘ဖေကြီး’ ဟု အားကိုးရိုကျိုးစွာ အထွဋ်တင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ မိခင်ကိုတော့ ‘မေကြီး’ ဟု ကျွန်မ ခေါ်ခွင့်မသာခဲ့ပါ။ ကျွန်မတို့ မောင်နှတတွေ မေကြီးဟု ခေါ်ခွင့်ရှိသူမှာ ဖေကြီး၏ထိပ်ခေါင်တင် ဇနီးမယားကြီး ဖြစ်လေသည်။
ဖေကြီး၏ ‘ပထမ’ ဘ၀ကို အနားမျှ မသီနိုင်ရှာသော ကျွန်မ၏မေမေကတော့ ‘ဒုတိယ’ တစ်ယောက်၏ နောက်ပင်ကျခဲ့ရသေးသည်။ (မေမေ့နောက်မှာ စတုတ္ထ မရှိတော့ခြင်းအတွက်တော့ ကျွန်မတို့တတွေ ဖေကြီးကို ကျေးဇူးတင်ရလေမလား မသိ။ )
ဖေကြီးအား ကျေးဇူးတင်စရာ တစ်ခုရှိသေးသည်။ ဖေကြီး၏ ဒုတိယမြောက် မေမေဆွေ ငယ်ရွယ်စောစီးစွာ ဆုံးပါးကွယ်လွန်သွားခဲ့ချိန်မှာ ဖေကြီးက မေကြီးနှင့်မေမေ့အား တစ်အိမ်တည်း အတူနေစေကာ လက်ဝဲလက်ျာရံစေလျှက် သွေးစည်းစေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်သည်။
ဖေကြီးသည် ကျွန်မတို့သားအမိအား နေရာပေးရှာပါ၏။ မေကြီးနှင့် အခြားသား၊သမီးများကလည်း ဖေကြီး၏သြဇာအတိုင်း တည်ကြသည်သာဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေ ကျွန်မတို့သားအမိ ခမျာမှာတော့ အနေအစား ကျဉ်းကျပ်သိမ်ငယ်ခဲ့ရတာ အမှန်။ မေမေက ဘ၀ကို နာကျည်းတတ်လာသည့်အခါ ကျွန်မအတွက် အိပ်ယာဝင်တေးများသည် ကြားဖူးနားဝ သားချော့တေးများ မဟုတ်ခဲ့ပဲ အနောက်နန်းမတော်မမြကလေး၏ ‘ပြာပြာညိုယောင်’ ပတ်မျိုးသာ ဖြစ်ခဲ့တော့သည်။
“ မမြကလေးထက်စာရင်တော့ မေမေက တော်ဦးမှာပေါ့။ သူ့ခေတ်အခါအရဆို လက်ဝဲ၊ လက်ယ်ျာစံ မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် မေမေက အရှေ့နန်းလောက်တော့ စံရဦးမှာ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် သမီးရယ်။ ဘယ်ဇနီးမယားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောမူပိုင်သာ ဖြစ်လိုဆန္ဒရှိကြမှာပါ”
ထိုစကားကို မေမေက ဖေကြီးကြားသာနိုင်သော အခြေအနေမျိုးမှာ ပြောတတ်လေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်သည်။ ဖေကြီးက ကျွန်မ စိတ်အနာ ကြီးမားသွားမှာ ပူပန်စိုးရိမ်ဟန်ဖြင့် မေမေ့အား ချော့မော့ဟန့်တားလေ့မြဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက အရွယ်နှင့်မမျှအောင် နားလည်လွန်တတ်နေခဲ့ပြီ။
ကျွန်မသည် မေမေ၏ တစ်ဦးတည်သောသမီး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဖေကြီးနှင့်ပတ်သက်လျှင်တော့ အလယ်အလတ်ခံရသူသာ ဖြစ်ခွင့်သာခဲ့ပါသည်။ ဖေကြီး၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမိုးတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပုံအောသွန်ကျဲနိုင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်မ ရရှိခံစားခွင့်ရှိသည့် ဝေစုကတော့ အကြီးဆုံးမမကြီးနှင့် အငယ်ဆုံးမောင်လေးတို့ တစ်ဝစားသုံးယူငင်ပြီးမှ ကျန် မောင်နှမများနှင့် ခွဲဝေရောင့်ရဲရနိုင်တာ မဟုတ်လား။
၀န်းကျင်အလည်မှာလည်း ကျွန်မတို့သားအမိက မြှောက်စားချစ်မြတ်ခံအဖြစ် မ၀င်ဆန့်ခဲ့ပြန်ပါ။ ကျွန်မ၏ဘ၀မှာ မေမေ့မေတ္တာသာ ရှိမနေခဲ့လျှင် စိတ်ဓါတ်တွေ သေဆုံးကုန်ခဲ့လို့ ခုချိန်မှာ ရုပ်ကြွင်းတစ်စတောင် ရှာတွေ့နိုင်ကြမည်မဟုတ်။
ဤ​လောက ကမ္ဘာမှာ ကျွန်မ လောဘတကြီး လိုချင်တောင့်တဆုံးသောအရာမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ထံမှ ကျွန်မအပေါ် ပုံအောထားရှိနိုင်မည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာများဟုဆိုလျှင် စာနာနားလည်ကြစေချင်ပါသည်။
ကျွန်မ၏ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ငတ်မွတ်တောင့်တခဲ့ရသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့အတွက် မောင့်ထံမှ ရင်းစားမက ပိုလျှံစွာ ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ယုံကြည်ခဲ့မိသည်။ ယနေ့တိုင် ရူးနှမ်းစွာ ယုံကြည်မျှော်လင့်နေဆဲလည်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ကျွန်မ၏ နိမ့်ကျကံဆိုးမှု သတင်းငွေ့ငွေ့တို့ကို မောင်နှင့် ကျွန်မတို့၏ အိမ်ထောင်သက် တစ်နှစ်ကျော်ကာလ ရောက်လေမှ ကျွန်မ ရိပ်မိသိတတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ စေ့ငုမိသမျှ ဟိုတစ်စ၊ သည်တစ်စကို စုစည်းခြုံငုံမိသောအခါ ကျွန်မ ဇာတ်ရည်လည်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်မ အမှန်တကယ် ကံဆိုးခဲ့ပြန်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
တကယ်တော့ မောင့်မှာ ချစ်တတ်သမျှ ချစ်ခြင်းအားလုံးကို ပိုင်စားရရှိခဲ့သူမှာ ကျွန်မဖြင့် မဟုတ်ပေပဲ။ ထို ကံကောင်းသူကလေးကတော့ မမရည်ပင် ဖြစ်နေခဲ့သည်တဲ့လေ။ (မမရည်တို့ မနာလိုချင်စရာ ကံကောင်းပုံကတော့ ကိုကိုကြီးထံမှရော..၊ မောင့်ထံမှပါ အရူးအမူး စွဲလန်းချစ်မြတ်မှုအားလုံးကို ပိုင်စားရရှိနိုင်ခဲ့သည်တဲ့လေ။ ) မမရည်၏ ရွေးချယ်မှုကတော့ မောင်သာဖြစ်ခဲ့ပြီး မောင့်ထံသို့သာ ချစ်မြတ်မှုအားလုံးကို တုန့်ပြန်နှင်းဆက်ခဲ့လေသည်။
ဒါပေမယ့် မောင်နှင့် မမရည်တို့၏ ကိန္နရာချောင်ခြား ဇာတ်လမ်းမှာ ကိုကိုကြီးသည် မည်သို့သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြန်သည် မသိပါ။ ကိုကိုကြီးသည် ဗီလိန်နေရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ရမည်ဟု ကျွန်မ ဥာဏ်မီသမျှ တွေးကြည့်မိခဲ့သည်။ ကိုကိုကြီးနှင့် မောင်တို့၏ မိဘနှစ်ပါးကတော့ ကိုကိုကြီးနှင့် အလိုတူအလိုပါ၊ သားကြီးဘက်မှ ဘက်ပင်းခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။
မမရည်ကလည်း နှစ်ဘက်သောမိဘများအတွက် သမီးအလိမ္မာအဖြစ် ဇွတ်မှိတ်ခံယူခဲ့ချိန်မှာတော့ မောင်တစ်ယောက် သွေးပျက်မတတ် ရူးသွပ်ခံစားခဲ့ရရှာပေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်မ သနားကြင်နာရသေးသည်။
ထိုအချိန်မှာ ကျွန်မက အဖြည့်ခံနေရာကို မသိနိုးနားရောက်ရှိလာကာ မောင်နှင့် ပတ်သက်ခဲ့ရတော့တာ..။
ထိုအကြောင်းခြင်းရာ အားလုံးကို ကျွန်မ စောစီးစွာ ရိပ်မိသိတတ်နိုင်ခဲ့လျှင် သားပေး၊ သမီးယူ ကြည်ဖြူခဲ့ကြသော မောင့်မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဖေကြီးတို့ကို ပြစ်တင်စွတ်စွဲကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ပစ်ခဲ့မိမည် ထင်သည်။
ထိုစဉ်ကတော့ ကျွန်မအား ‘ဖေကြီးရဲ့ သမီး’ ဆိုသော အကြောင်းအချက် တစ်ခုတည်းနှင့်ပင် လိုလားကြည်ဖြူစွာ စပ်ဟပ်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ကြသော မောင့်ဖေဖေနှင့် မေကို နှစ်လိုလေးစားမိခဲ့သေးသည်။ ဖေကြီးအပေါ်မှာလည်း ကျွန်မတစ်သက်တာ ခံစားလာခဲ့ရသမျှ စိတ်ဒဏ်ရာတို့အတွက် မောင့်အားပိုင်ဆိုင်ခွင့် တစ်ခုတည်းနှင့်ပင် ပြေအေးကြည်လင်ခဲ့မိတော့တာ ဖြစ်သည်။
ကျွန်မက မောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ထိုမျှအထိ ရူးသွပ်ခဲ့ဖူးတာ ဖြစ်ပါသည်။
မောင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့၏ မိဘနှစ်ပါးသည် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဆုံးပါးကွယ်လွန် မသွားခဲ့ကြဘူး ဆိုလျှင်……
ကိုကိုကြီးလည်း ခရီးလမ်းတစ်ခုမှာ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြင့် သေလွန်မသွားခဲ့ဘူးဆိုလျှင်…….
ကျွန်မ ခုလို ၀န်တိုပူပန်မှုတွေ ခံစားဖိစီးနေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။
ထို့ပြင် မောင်တို့၏ မိဘများရှိကြစဉ် အခါကတည်းက မောင်နှင့် ကျွန်မက မောင့်မိဘများနှင့် တစ်အိမ်တည်း အတူနေပြီး ကိုကိုကြီးနှင့် မမရည်တို့က ခြံဝန်းကျယ်ကြီးထဲရှိ မလှမ်းမကမ်းမှာပုံစံတူ တစ်ထပ်တိုက်ကလေးနှင့် နေထိုင်ခဲ့ကြသော အစဉ်အလာသည် အလွန်တရာ ဆိုးရွားသော (ဖျက်ပြင်ရန် မလွယ်ကူတော့သော) မနှစ်မြို့နိုင်စရာ အခြေအနေပဲ ဖြစ်ပါသည်။
မမရည်၏ ခေါင်းမာမှု၊ ဇွတ်တရွတ်ဆန်မှုများကတော့ ကျွန်မ၏ သံသယ အကြိတ်အခဲကို ပိုမိုရင့်သန်စေရန် အကူအပံ့များပဲ ဖြစ်တော့သည်။
၀တ္ထုတိုက နည်းနည်း ရှည်သွားတော့ နှစ်ပိုင်းခွဲတင်လိုက်ရတာ နားလည်ပေးကြပါဦး။ ဒုတိယပိုင်း ဆက်တင်ပေးပါ့မယ်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 14, 2011 at 3:09 PM
မြသွေးနီ November 15, 2011 at 3:04 PM
အပိုင်း(၂)ကို ဆက်ပြီ ကိုသတိုးရေ..။
အလင်းသစ် November 15, 2011 at 10:19 PM